पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले धनुषा ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसका प्रभावशाली नेता उठेकै क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोलेपनि मनोनय दर्ता गराएपछि अहिले धनुषा ३ मधेशको ‘हट जोन’ बनेको छ।
कतिसम्म भने कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा फोरम–राजपा नजोडिनुको एउटा मुख्य कारण नै धनुषा–३ को दावी मानिएको छ। मधेशको यही ‘हट जोन’ का चर्चित उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिसँग नेपालखबरले फोनमा सोध्यो–
मनोनय दर्तापछि चुनावी अभियानतिर लाग्नु भयो कि काठमाडौं फर्केर प्रतिस्पर्धीलाई फकाउँदै हुनुहुन्छ?
म अहिले धनुषाको ३ नम्बर क्षेत्रमै छु। उम्मेदवारी दर्तापछि पूर्णरुपमा चुनावी अभियानको तयारीमा छु। अब मेरो नियमित कार्यतालिका चुनावसँग नै सम्बन्धित हुनेछ। पार्टीको अन्य कुनै जरुरी काम परेछ भनेमात्र काठमाडौं आउनुपर्ला। नत्र चुनावअघिसम्म सबै गाउँमा जाने योजनामा छु।
जित्नु हुन्छ? धनुषा–३ बाट अवष्यपनि विजयी हुन्छु।
कसरी? अघिल्ला चुनावमा मैले गरेका सबै वाचाहरु पुरा भएका छन्। तपाईं आफै यो क्षेत्रमा आएर हेर्नुभयो भने पनि यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्षेत्र मैलेमात्र होइन, मेरा पिताजी (महेन्द्रनारायण निधि) ले पनि राजनीति गर्नुभएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रका मतदाताले म, मेरो पिताजी र परिवारलाई राम्रोसँग चिनेका छन्। मैले गरेका काम यहाँका जनताले देखेका पनि छन्। त्यसैले चुनाव जित्न कुनै अप्ठ्यारो छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोपनि त्यहीँबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ नि? हो, उहाँ मेरै क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक हो। गणतन्त्रमा जसले जहाँबाट पनि चुनाव लड्न पाउँछ। प्रतिस्पर्धाको अधिकार नेपालको संविधानले पनि दिएको छ। तर राजेन्द्र महतोजी यसअघि सर्लाहीबाट चुनाव लड्दै आउनुभएको थियो। अहिले के सुर चल्यो र धनुषा–३ मा आउनु भयो, त्यो मैले बुझ्न सकिन।
उम्मेदवारी दर्ताअघि कुरा भएन? मैले पहिले भनेको थिएँ– धनुषाबाट चुनाव लड्ने निर्णयले तपाईंलाई घाटा हुन्छ। तर, उहाँले मान्नु भएन। मेरो पकड क्षेत्रमा सर्लाहीबाट आउनु भएका नेताले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुने हो, मलाई थाहा छैन।
राजपा–फोरमसँग कांग्रेसको तालमेल पनि त भएन नि? हामीले दुई नम्बरका सबै क्षेत्रमा मिलेर अगाडि बढौं भनेका थियौं। तर, फोरम–राजपाका नेताहरुले मान्नुभएन। उहाँहरुले प्रदेश नम्बर २ का कांग्रेसले जित्ने क्षेत्रहरु छानीछानी माग्नुभयो। ३२ मध्ये अधिकांश सिट माग्नुभयो। हामीले सबै कुरा पूरा गर्न सकेनौँ। मिलाउने कोशिस गर्दागर्दै पनि उहाँहरु भाग्नुभयो।
प्रकाशित १८ कार्त्तिक २0७४ , शनिबार | 2017-11-04 08:16:05